प्रधानसेनापतिज्यू, हाम्रा सीमाहरू मिचिँदा तपाईंको मन दुख्दैन ? - Nepal Insider
Home/समाचार/प्रधानसेनापतिज्यू, हाम्रा सीमाहरू मिचिँदा तपाईंको मन दुख्दैन ?
नाकाबन्दीको समयमा नेपाली सेनाले निकै ठूलो सकारात्मक भूमिका खेलेको हो भन्ने सुनिन्छ । मलाई त्यो हो जस्तो पनि लाग्छ । सेनाको डिप्लोमेसी सफल भएकै हो । अब यो सीमाका बारेमा पनि सेनाले डिप्लोमेसीको भूमिका चाल्न जरूरी छ । यहाँको भारतीय दूतावासमा घाँटी फुट्ने गरी कराएर हुनेवाला केही हैन । लिपुलेक, कालापानीको आफ्नो भूभाग मिचियो भन्दै युवाहरू भारतीय दूतावासको अगाडि आक्रामक शैलीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हो, यो युवाहरूको आक्रोश हो, स्वाभाविक छ । तर नेपालीहरूको आक्रोश भने वर्षौंदेखिको हो । हाम्रो सेना कहिले जाने हो सीमामा ? लिपुलेकतर्फ कमान्डो फोर्स किन नपठाउने ? के नेपाली सेनाको काम बाटोको ठेक्कापट्टा मात्रै हो ? त्यस्तो त हैन होला।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३७० वर्गकिलोमिटर जमीन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । दार्चुलापछि सबैभन्दा धेरै नवलपरासीको भूमि मिचिएको छ । सुस्ता र आसपासको क्षेत्रमा भारतले १४५ वर्गकिलोमिटर जमीन मिचेको छ । नेपालको ६०६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मिचिए पनि अहिलेसम्म फिर्ताका लागि सरकारी पक्षबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन । यसकारण फेरि पनि सेनापतिज्यूलाई प्रश्न छ : हाम्रा सीमाहरू मिचिँदा तपाईंको मुटु दुख्दैन ?
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् कति छ आज ?